China Amphibious Excavator fekitari uye bhizimisi | Bonovo
Yakazara 3D uye dhizaini dhizaini:
Spud Poles Sisitimu
Iyo Spud uye Hydraulic Mechanism inosanganisirwa mune yakavharwa vice pontoon, iyo yakaiswa pamativi ese maviri eamphibious excavator. Iyo hydraulic simba inogona kushandiswa kudzora kudzikamisa kana kusimudza-uye-pasi kumisikidza. Kureba kwayo kunoonekwa nekudzika kwenzvimbo yekushanda. Iwo ma spud anomiswa kana achinge achishanda, obva aiswa mumadhaka ne hydraulic mashini. Iko kushandiswa kwema spuds kunovandudza zvakanyanya kugadzikana kwekushandisa kwemidziyo mumvura.
Dhizaini yekumisikidza dhizaini:
Inodzoreka Pontoon zvinoreva kuti chinhambwe chinogona kuchinjika otomatiki pakati pemapontoon maviri mune imwe nhanho. Munguva yekuvaka uchishanda, kana paine nzvimbo yakamanikana yekushanda, mapontoons ari-pakati penzvimbo anogona kuderedzwa panguva yekushanda. Nebasa renzvimbo yekugadzirisa, tinogona kubatsira kusimudzira chassis kugadzikana uye kugadzirisa basa kugona kwevatengi.
3 Maketani Dhizaini: Mushure meketani ichishandiswa kwenguva yakati rebei, huni inowedzera nekuda kwekupfeka kwepini bushing, zvinozoita kuti cheni yese iwedzere uye zvichizokonzera kudonhedza ngetani kana kutsvedza kana uchifamba. Ichakanganisa zvakanyanya mashandiro. Iyo tensioning chishandiso inogona kuve nechokwadi checheni pini uye kutyaira giya mazino akabatanidzwa nemazvo nekugadzirisa chinzvimbo che sprocket. Iyo bhaudhi inosimbisa ndeye yakajairwa kumisikidzwa kwepontoon yedu. Cylinder kuomesa kuri nyore pane kusimbisa bhaudhi, iyo inogona kuita gadziriro yekugadzirisa uye kuona kufamba kwakadzikama uye kwakanaka.
Kuedza kwekuyedza & kuyedza kwakawanda-basa - nzira refu yekufamba & kupomba pombi
- Nzvimbo yevhu inochenesa kumigodhi, masango uye nzvimbo yekuvaka Kudzoreredza kwemvura uye kudzoreredza
- Kudzivirirwa kwemafashama uye kudzora chirongwa chekutsausa mvura Shanduko yemunyu-alkali uye pasi-gohwo ivhu Kudzika kwemigero, rwizi mugero uye muromo murwizi Kuchenesa kweMadziva, mahombekombe, madziva nenzizi
- Kuchera migero yemafuta & gasi pombi yekuisa nekuisa
- Kudiridza kwemvura
- Landscape chivakwa uye zvakasikwa nharaunda kugadzirisa
Mudziyo kurodha uye Kutumira: Isu tinoita inoshanda kurodha chirongwa kusevha yako yekutakura mutengo wekutakura.
Yako odha ichagadziriswa kuburikidza nemaitiro aya
Pashure: Track Shoe
Zvadaro: Pakati Pekuchera
amphibious excavator yekurendesa
amphibious excavator yekutengesa
amphibious vagadziri vekuchera
amphibious excavator mutengo
swamp ngoro yekuchera